Daryeelka dayrta ee beerta | January 2020
Talooyinka ugu Sarreeya ee Daryeelka Xadiiqada ee Dabiiciga ah
Ugu Weyn Ee Daryeelka dayrta ee beerta
Dayrtu waa xilliga tayada iyo tirada dalagga ee sanadka soo socda uu si toos ah ugu xiran yahay. Haddii aad si ku filan u xaddiddo daryeelkaaga geedo midho leh, ka dibna ha ka baqin; xagaaga waxaad arki doontaa natiijada shaqadaada iyo aqoontaada. Sidaa darteed, ha ahaato caajis ah oo waxkasta gadaal u dhigo dambe. Waa xilliga dayrta in ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo beerta cudurada iyo cayayaanka, waa ku filan in bacrimiyo, qoyaan iyo qodo ciidda, iyo sidoo kale inay bixiyaan taxadar gaar ah si loogu diyaariyo jiilaalka.
Lacfiol: beeritaanka, daryeelka iyo sii kordhaya ubax laga bilaabo abuurka dhulka. "Queen Queen", "Cherie" iyo warshad alpine
Fasal canab "Volzhsky"
Sida loo soo saaro digaagga hoostiisa si sax ah?
Waa maxay casiirka waxtarka leh ee ka yimaada xididka faleebada? Noocyo, codsi iyo cuntooyin tallaabo tallaabo ah
Beerta lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo, waxaan dooneynaa inaan helno goosan weyn oo isku mid ah si loo xaqiijiyo qiimaha beeraha. Bannaanka uqorshaha badan, iibsashada noocyo kala duwan oo wax soo saar leh, iloobin in Beelaha iyo noocyada leh dhalidda sare ay u baahan yihiin inay abuuraan xaalado ku haboon oo quudinta waqtigu si fiican u ciyaaraan. Read More
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka dayrta ee beerta 2020